| किन भयो प्रचण्ड सरकारमा गच्छदारलाई ‘नो इन्ट्री’ ? कारण यस्तो छ !
किन भयो प्रचण्ड सरकारमा गच्छदारलाई ‘नो इन्ट्री’ ? कारण यस्तो छ !
काठामाडौं, २७ साउन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मधेसी दलका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई 'नो इन्ट्री' जस्तै भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गच्छदारलाई मन्त्री बनाउन सकारात्मक भएपनि मधेसी मोर्चाको चेतावनी र कांग्रेसले पनि इच्छा नदेखाएपछि गच्छदार स्वयंमलाई सरकारमा लैजाने सम्भावना सकिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा गच्छदार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, सरकारविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएपछि फोरम लोकतान्त्रिकले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको चुनावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मत दिएको थियो ।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड सरकारमा दुई जना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहनेछन् । जसमा कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र माओवादीबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भइसकेका छन् । तर, गच्छदारलाई नलिएपनि उनको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकलाई भने सरकारमा लैजाने सम्भावना कायमै छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अहिले पनि गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकका लागि दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । नेताहरुका अनुसार यो पटक पनि गच्छदार स्वयंम सरकारमा जान र मन्त्री बन्न निकै पहल गर्नुभएको थियो । तर, तीनबुँदे सहमति गर्दै प्रचण्डलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाले उहाँलाई मन्त्री बनाउन नहुने शर्त नै अघि सार्दै गच्छदारलाई मन्त्री बनाए आफूले समर्थन नगर्ने धम्कि दिएपछि प्रचण्ड हच्किएका हच्किनु भएको थियो ।
यता फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले आफूहरुले प्रचण्डलाई भोट हालेको भदन्दै सहयोगीकै भूमिकामा रहने आश्वासन दिनु भएको छ । तर, सकारमा सहभागिताबारे कुनै प्रस्ताव नआएको उँहाको दाबी छ । प्रधनमन्त्रीमा प्रचण्डको समर्थक समेत बन्नुभएका चौधरीले प्रचण्डको तर्फबाट अहिलेसम्म आधिकारिक प्रस्ताव नआएको भन्दै प्रस्ताव आए त्यसबारे पार्टीमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच सत्तारुढ कांग्रेसले १३ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ । राप्रपालाई दुई मन्त्रालय दिइएको छ भने नेकपा संयुक्तले एक पाएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार फोरम लोकतान्त्रिकका लागि दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । र, साना दलबाट अरु दुई मन्त्री हुने सम्भावना छ । माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।